Daawo:Qalbi wanaagii Gudoodo Carwo “Shamis Abokor Ismaaciil” | Gacanlibaaxnews
Daawo:Qalbi wanaagii Gudoodo Carwo “Shamis Abokor Ismaaciil”
December 15, 2017 - Written by C M
Alle ha u naxariistee Shamis Abokor Ismaaciil oo ku magacdheerayd â€œGuduudo Carwoâ€ oo khamiistii todobaadkii hore oo ku beegnayd 07-12-2017 ku geeriyootau laguna aasay Hargeysa. Waxa ay ahayd qofkii ugu horreysay ee haween ah ee idaacal Af soomaali ah ka heesta. Sida lo aqoonsadayna waa hooyada fanka Soomaaliyeed. Waxaana ay fanka ku biirtay sannadkii 1952-kii, hasayeeshee muddo dheer ka maqnayd fanka ka hor intii aanay geeriyoon, iyadoo intii u dhexaysay 1997 illaa 2017 sariil u ahayd xaruunka faaliga oo ku dhacay. Laakiin maskaxdeeda, hadalkeeda, maqalkeeda iyo indhaheeduba si sax ah ayay u shaqaynayaan. Iyada oo xaaladaa xanuun ku jirta haddana cibaada foodda kamay qaadi jirin, oo waxay ahayd qof si weyn ilaahay ugu xidhan.
Halkan hoose kaga bogta wareysigaa uu Cabdishakuur X. Muxumed muuse (Heersare) la yeeshay Shamis Abokor â€œGudoodo Carwoâ€ oo dhinacyo kala duwan taabanaya, hasayeeshee ay iga cudurdaaratay inay ka xog-waranto taariikhdii fankeeda, iyada oo arrintaa ku sababaysay inay muddo hore ka baxday hawlaha fanka.